ဒီနေ့ Aries အတွက်အဆင်ပြေလား? - Oscရာဝတီ
ဒီနေ့ Aries အတွက်အဆင်ပြေလား?
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - Aries Daily Horoscope
ကျန်းမာရေးနှင့်စွမ်းအင်သည်သင်၏အားသာချက်များဖြစ်သည်ဒီနေ့။ မည်သည့်အလုပ်ကမျှမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ သင်စီစဉ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းပြproblemနာမရှိဘဲပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကိုဆက်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင့်အားယနေ့ခေတ်အတွက်သင်၏နေထိုင်ရာနေရာနှင့်ကျန်းမာရေး၊ ငွေကြေးနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးဆုံးအရာများကိုငါပေးမည်။ ရုပ်သံလိုင်းသို့စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်သတိပေးခြင်းခေါင်းလောင်းကိုဖွင့်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ကြားသည်။ သင်သည်သင်၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုနေ့တိုင်းသိပြီးအခြေအနေများစွာကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးကြိုတင်မမြင်နိုင်သော Aries နှင့် ၂၀၂၁ မတ်လ၊ မတ်လ ၉ ရက်၊ မတ်လ ၉ ရက်တွင်ဤအချက်ကိုလိုက်နာပြီးသင်နောင်တမရပါ ၎င်းသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတွေ့ကြုံမှု၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း၏လဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိလာပြီးသင်လိုချင်သောအရာကိုမှန်ကန်သောနေရာတွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖော်ပြခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည်။
သင်၏အချိန်သည်မင်းအတွက်အချိန်ဖြစ်သည်။ ယခုမထိုက်တန်သူများနှင့်မဖြုန်းတီးပါနှင့်လ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်ဆီလျှော်မှုမရှိသောအရာများအပေါ်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်။ ဒီသဘောထားကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးသင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိတာကိုပဲအာရုံစိုက်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏မွေးနေ့ဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်သည်ဤလှပသောအဆင့်ကိုစတင်ခံစားရမည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေး၊ ငွေကြေးနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှုထောင့်ကိုသွားတော့မည်။ သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင့်အားနေ့တိုင်းလက်မှတ်ထိုးရန်နှင့်သင်နှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်အရာအားလုံးကိုသင်သိရန်နှင့်သင်အသိပေးစာခေါင်းစဉ်ကိုစာရင်းသွင်းပြီး activate လုပ်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိုသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအခြေအနေများကိုရှောင်ရှားခြင်းအရေးကြီးဆုံးအရာကတော့သင်ဟာစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချမိဘဲ၊ သင်ဟာဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ခြင်း (သို့) အသစ်တစ်ခုမစခင်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကင်ဆာသို့မဟုတ် Scorpio နှင့်အငြင်းပွားမှုများကိုထည့်သွင်းရာတွင်မြေကြီးမှဖြစ်ပေါ်လာသောတင်းမာမှုအရှိန်အဟုန်ကိုပင်သင်ကိုယ်တိုင်ဒီအာကာသထဲကိုပေးလိုက်ပြီဆိုသည့်အချက်ကိုနောင်တမရပါနှင့် of of you အကယ်၍ သင်အံ့ the ဖွယ်ကောင်းသောနိူင်ငံသို့ခြေတစ်လှမ်းတည်းဖြင့်ရောက်ရှိနေပြီးယနေ့လနှင့်သင်စိတ်အားတက်ကြွပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်ခြင်းနေ့စဉ်အစီအစဉ်တွင်မပါ ၀ င်ဘဲသင်၏ဘဝတွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုအကြံပြုပါ။ y အခြားသူများအတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကြောင့်သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသင်လုပ်ဆောင်ပါ။ လူတိုင်းကိုမေတ္တာဖြင့်ဂရုစိုက်ပါ။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအလွန်အကျွံမလုပ်ပါနှင့်၊ လနှင့်အတူအလုပ်လုပ်စဉ်တွင်သင်ဖြစ်လိမ့်မည်သင်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအလုပ်ပြtoနာများအတွက်မှန်ကန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်သည်အလိုလိုသိသောခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဘုံသဘောနှင့်ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီးငွေကြေးနှင့်ကံကြမ္မာအပေါ်စုံတွဲကိုဆက်သွယ်ပေးသောသင်၏ Aries မီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၏ပုံမှန်စိတ်အားထက်သန်မှု။ ယနေ့လ၏ဤအဆင့်တွင်သင်၏မွေးနေ့သံသရာ၏မတ်လယခုလတွင်အခြေခံပြissuesနာများကို ဦး စား ပေး၍ သင်၏စီမံကိန်းများကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သန္နိcarry္ဌာန်ချထားရန်လိုအပ်သည်။ ယနေ့အချိန်၌ငွေရေးကြေးရေးအရအောင်မြင်သောယနေ့နက္ခတ္တဗေဒအရလိင်စွမ်းအင်သည်အင်္ဂါနေ့အလယ်အလတ်အလယ်အလတ်အားဖြင့် အခြေအနေအသစ်များကိုကျွမ်းကျင်ရန်သင်အသုံးချသင့်ပြီးသင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်စကားလုံးများ၏အကျိုးဆက်ကိုစဉ်းစားပါ သူမမှည့်သောအသီးကိုစားပြီးဒီနေ့အရောင်သည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးယနေ့လူများအတွက်ကံကောင်းခြင်းမှာ ၁၈၃၃ ၃၄ နှင့် ၄၅ ဖြစ်လျှင်စောင့်ဆိုင်းပုံကိုမသိသောသူသည်အစာစားခြင်းအန္တရာယ်ကိုကြုံတွေ့ရသည်။ မင်းကြိုက်တဲ့မင်းကလိုင်းကပဲနင်သတိပေးတဲ့ခေါင်းလောင်းကိုစာရင်းသွင်းပြီးဖွင့်ပေးတယ်။ ဒါမှမင်းရဲ့နေ့စဉ်အခမဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းမြင်ကွင်းကိုဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေ၊
အတူသဟဇာတဆုံးအရိပ်လက္ခဏာAriesယေဘုယျအားဖြင့် Gemini, Leo, Sagittarius နှင့် Aquarius ဟုမှတ်ယူသည်။ နှင့်အတူအနည်းဆုံးသဟဇာတနိမိတ်လက္ခဏာများAriesယေဘုယျအားဖြင့်ကင်ဆာနှင့် Capricorn ဖြစ်သည်။ နေရောင်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကယေဘူယျအားဖြင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည်။
ရာသီဥတုချစ်သူများပြန်လာကြ! ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ၊ ခင်ဗျား Aries နဲ့ချိန်းတွေ့ဖို့စဉ်းစားဖူးသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ရဲရဲရဲရဲသော၊ ထိုလုံ့လရှိသူ၊ ကြင်နာတတ်သူများသည်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသော၊ ဂရုစိုက်တတ်သည့်မိတ်ဖက်များဖြစ်ကြသည်။ သင်အနည်းဆုံး Aries နှင့်ချိန်းတွေ့ရန်သင်စဉ်းစားသင့်ကြောင်းအခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာခင်ဗျားတို့ Aries နဲ့ဘာကြောင့်ချိန်းတွေ့သင့်တာလဲ၊ သူမ Charisma ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆွေးနွေးထားတယ်။ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာသင်အားသန်နေပါသလား။ Aries သည် 'စစ်မှန်' နေသလား။ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည်။ ထို့ထက် ပို၍ # 1 သူတို့သည်သတ္တိရှိရှိ Aries သည်စွန့်စားရန်မကြောက်တတ်။
အချို့သော Aries များသည်လူလတ်တန်းစားများနှင့်အလွန်အမင်းဖော်ပြခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အလွန်မဆင်မခြင်ဖြစ်ရပ်များစွာကိုမကြောက်ပါ။ တကယ်တော့သူတို့ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ခံရမယ့်အစားသူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုရင်ဆိုင်ချင်ကြတယ်။ များသောအားဖြင့် Aries သည်မဆိုင်းမတွချက်ချင်းပင်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သည်။
သူတို့သဘာဝပဲ။ ၎င်းကို Mars Effect ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုရဲရင့်တဲ့သဘောသဘာဝဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာချစ်သူတွေကိုအလွန်အကာအကွယ်ပေးတဲ့ဆက်သွယ်မှု ips များမှာရှေ့တန်းကိုရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါပြtroubleနာကြုံတွေ့ရတဲ့အခါသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့နံပါတ်ကို speed dial မှာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
စကားမစပ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပါ Aries ကိုထူးခြားတဲ့အရာတွေအကြောင်းငါတို့ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ အိုကေ၊ အခုလာမယ့်အချက်ကိုပြောဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ #2သူတို့စိတ်အားထက်သန်ကြ Ar ကမ္ဘာမှာ Aries ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဘာမှမရှိဘူး။
ယင်းသည်ဘဝအပေါ်သူတို့၏အကောင်းမြင်သဘောထားကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီသဘောထားကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအပါအဝင်သူတို့လုပ်သမျှအရာအားလုံးမှာထင်ဟပ်။ Aries ကိုချိန်းတွေ့တဲ့အခါမင်းမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်တွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
သူကသင့်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ အဲဒီအစား, သူတို့ရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်သင်ပါဝင်ပတ်သက်လာဖို့အပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်ဟာသူတို့စွမ်းအင်ကိုသုံးလာလိမ့်မယ်။
Aries နှင့်ချိန်းတွေ့ပြီးလအနည်းငယ်အကြာတွင်သင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ထပ်တူစိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဘ ၀ တွင် Aries ၏လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ဟာကူးစက်တတ်ပြီးကောင်းကောင်းသိတယ်။ #3သူတို့ကခက်ခဲတယ်၊ ဒါကြောင့် Aries ကငါလုပ်ချင်တာကိုလုပ်စရာမလိုဘူး။
ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကလာပါတယ်။ Aries အများစုသည်ဘဝကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းခံကြရသည်။ ဒီသဘောထားကသူတို့ကိုဘဝမှာရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေရောက်အောင်ကူညီပေးတယ်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်မကိုင်တွယ်နိုင်လျှင် Aries နှင့်ချိန်းတွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆောင်းပါးရဲ့အစမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၊ Aries လူတွေဟာလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကိုသင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်သင့်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့ရဲ့မယိမ်းယိုင်တဲ့အထောက်အပံ့ကိုသင်ရရှိမှာပါ။
ဒါကတကယ်တော့သူတို့ဟာ Scorpio နဲ့မျှဝေတဲ့စရိုက်တစ်ခုပါပဲ။ ၎င်းသည်ဂြိုလ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည့်လက္ခဏာနှစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်သောဂြိုလ်ဖြစ်သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကသူတို့ဟာ Scorpio နဲ့မျှဝေတဲ့တစ်ခုတည်းသောစရိုက်လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။
ဤနှစ်ခုမြောက်ရာသီဥတုလက္ခဏာများအကြားနောက်ထပ်ဘုံလက္ခဏာတစ်ခုရှိသည်။ နောက်တစ်ခုပြောရမယ်။ သူတို့ဟာစစ်မှန်မှုကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒီဟာက Scorpio နှင့် Aries တို့မှာတူညီတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာစစ်မှန်တဲ့အချက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရလဒ်အနေနှင့်၊ ဤဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုသည်များသောအားဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သူတို့ရဲ့ဒြပ်စင်မကိုက်ညီပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီနှစ်ခုသဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီစရိုက်က Aries ဟာသေးငယ်တဲ့လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုပိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတယ်။ သည်အခြားရာသီခွင်လက္ခဏာများထက်အနည်းဆုံးသေးငယ်သည်။ ယင်းကသူတို့ကိုမာနထောင်လွှားစေနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သူတို့၏ဘ ၀ ဇာတ်ကောင်များတွင်ဒရာမာနိမ့်ကျခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်သူတို့ကတစ်ခုခုကိုမုန်းတယ်ဆိုရင်သူတို့ကမင်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ ၎င်းကိုစိတ်ထဲ ထား၍ Aries အားထင်မြင်ချက်တောင်းရန်တောင်းဆိုသောအခါသတိထားပါ။ ဤလူများကိုသူတို့၏စကားများကိုမပြောတတ်ပါ။
ဒါကြောင့်သူတို့ထင်မြင်ချက်ကိုမတောင်းပါနဲ့ဒါမှမဟုတ်တုံးတိတိကုသမှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါ #5You Charismatic နိူင်ငံရေးကိုနှိမ့်ချသူ Virgo နှင့်မတူသည်မှာ Aries သည်သြဇာရှိသူဖြစ်သည်။ ဤသည် charism သူတို့ကိုခေါင်းဆောင်မှုရာထူးအတွက်သူတို့ကိုကူညီပေးသည်။
၎င်းသည်သူတို့ကိုအလုပ်ခွင်တွင်သတိပြုမိစေရန်ကူညီပေးပြီးလူများကိုဆွဲဆောင်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏ချိန်းတွေ့ခြင်းဘ ၀ ၌လည်းသူတို့ကိုကူညီသည်။ အကယ်၍ သင်ဟာ Aries ကိုချိန်းတွေ့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်၊
ဤအချက်ကြောင့်သင့်အား Aries များကိုလိုက်ရှာခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းကိုအပြစ်မတင်ဘူး Aries ကလူကောင်းတစ် ဦး ဖမ်းဖြစ်ကြသည်။
ဆက်ဆံရေးတွင်, ဤဆွဲဆောင်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်စိတ်ဝင်စားစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။ ကိုသတိရပါ, Aries အဆိုပါရာသီခွင်၏ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ Charisma သည်ခေါင်းဆောင်မှုအတွက်အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိုး, ဆက်ဆံရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ သူတို့ကသင့်ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ #6သူတို့ကမင်းကိုလုယူဖျက်ဆီးပစ်တော့မယ်။ စျေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်တွေလား၊ ဒါမှမဟုတ်ညစာအတွက်မင်းကိုခေါ်သွားရင်၊ Aries လူတွေဟာသူတို့ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုဂရုစိုက်တာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Aries ဟာမင်းကိုချစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွက် ဦး တည်ထားတဲ့ zodiac သင်္ကေတဖြစ်တဲ့အတွက်သင့်ကိုပြလိမ့်မယ်။ သင်အလွန်ဆိုးရွားလိုသော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုသို့မဟုတ်စျေးကြီးလွန်းသည်ဟုသင်ထင်သောနာရီများသည်သူတို့တံခါးရှေ့မှာမှော်အရပေါ်လာလိမ့်မည်ကိုသတိရပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာချစ်ခြင်းခံရဖို့ဖြစ်ကြောင်းသိစေချင်တဲ့ Mars ရဲ့ကလေးနဲ့အတူရှိနေလို့ပါ။
ဤသဘောသဘာဝသည်သင့်ကိုသူတို့အပေါ်တွင်အလွန်မှီခိုစေလိမ့်မည်။ သူတို့ကမင်းကိုဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အရမ်းခက်ခဲတဲ့၊ မရှုပ်ထွေးတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။
သူတို့ကိုမောင်းထုတ်လိမ့်မယ် အဲဒီအစား၊ သင်ရရှိတဲ့ဂရုစိုက်မှုအားလုံးကိုပျော်မွေ့ပါ။ ဒါသူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘာသာစကား၊
ငါကရန်အသုံးပြုရရန်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံအပြန်အလှန်။ မည်သည့်အကြောင်းပြောဆိုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကိုရာသီခွင်အမှတ်အသားပြုသည့်အရာများအကြောင်းလေ့လာပါ။ #7You're Wildly သစ္စာစောင့်သိနေတဲ့အတွေးအခေါ်များစွာမတွေးဘဲနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုခုန်ပေါက်နိုင်တဲ့နိမိတ်လက္ခဏာအတွက် Aries သည်သင့်အပေါ်သစ္စာစောင့်သိနိုင်ပါသည်။
နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာများစွာက Taurus သည်သစ္စာစောင့်သိခြင်းအရှိဆုံးသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုသင့်အားပြောသော်လည်း Aries သည်နောက်မှမဝေးလှပါ။ Aries သည် 'သေသည်အထိကျွန်ုပ်တို့ကိုခွဲခြား' စိတ်ဓာတ်နှင့်ဆက်ဆံရေးမစတင်ပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်သူပင်ပေါ့ပေါ့တစ်ခုခုစတင်လိမ့်မယ်; သူတို့သည်သင်နှင့်ပိုမိုရင်းနှီးလာသည်နှင့်အမျှအခြေအနေများပိုကောင်းလာမည်။
သူတို့သည်သင်နှင့်အချိန်ပိုပေးလိမ့်မည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဆက်ဆံရေးအပေါ်သူတို့၏သဘောထားသည်လည်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင့်အားအလွန်သစ္စာစောင့်သိပြီးကာကွယ်ပေးသည်။
သူတို့က Taurus, Cancer၊ Capricorn တို့နဲ့မတူရင်တောင် Aries ကသစ္စာစောင့်သိနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့, သူတို့ကသူတို့ဆက်ဆံရေး၌ရှိကြ၏သဘောပေါက်ရန်သူတို့ကိုခဏကြာပေမယ့်သူတို့ပြုလျှင်, သူတို့သည်သင် Aries နှင့်အတူနေပါလိမ့်မယ်။ တချိူ့ကိုချိန်းတွေ့သည့်အခါသင်မလုပ်သင့်သောအရာများ။ နံပါတ် ၁ Aries ဖြစ်မနေပါနဲ့ open-minded လူတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါ။
ထိုနည်းအားဖြင့်သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါကမင်းရုန်းကန်နေရတဲ့အခက်အခဲပဲ။ အလွန်အကျွံဝေဖန်ခြင်းခံရလျှင်သင်လည်းသင့်ကိုယ်သင်ပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ပွင့်လင်းရိုးသားပြီး၊ နံပါတ် (၂) LieAries လူများသည်လိမ်လည်သူများကိုမုန်းတီးကြသည်။ Aries နှင့်အတူ, သူတို့မုန်းသောအခါ, သူတို့ကတစ် ဦး စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူလုပ်ပါ။
သူတို့မုသားနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါဤပြသထားတယ်။ Aries လူတို့သည်မုသားနှင့်မုသာကောင်များကိုမုန်းကြသည်။ သငျသညျသူ့ကိုမုသာစကားကို၏အမှားလုပ်လျှင်, ပြင်ဆင်ထားပါ။
မင်းတို့သူတို့ကိုဘယ်တော့မှမဖြတ်နိုင်အောင်သေချာအောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ #3သူတို့ကိုစိတ်ဆိုးမနေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မသွားခင်စိတ်ကူးကသင့်ကိုစိတ်ဓာတ်မကျစေဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ ၎င်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်သာယူမှတ်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်အမှတ်ရရန်, သင်သည်သူတို့၏စိတ်ထားကိုစိတ်ပျက်သမျှသောမှာအကြံပြုသည်မဟုတ်။ သင်၏ဒေါသသည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမျိုးမဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစားသင်ကသူတို့ကိုသင်ကသူတို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန်အကြံပြုလိမ့်မယ်။
Aries - လူတွေဟာဒေါသမထွက်တတ်ကြဘူး။ ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဟာ Aries နဲ့ချိန်းတွေ့ဖူးပါသလား။ ဤဆောင်းပါးကိုသင်တွေ့ပြီဆိုလျှင်ချိန်းတွေ့ရန်သင်စဉ်းစားမည်လော။ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ။ သင့်ထံမှကြားနာရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
Aries Lucky Day ဆိုတာဘာလဲ။
နဝမနေ့လတစ်ခုစီ၏နံပါတ်များသာမကကိုး၊ ၁၈ နှင့် ၂၇ တို့၏မြှောက်ကိန်းများဖြစ်သောရက်များသည်တစ်ခုအတွက်အတွက်ကံအကောင်းဆုံးနေ့ရက်များဖြစ်သည်။Aries။ နဝမနေ့နဝမလ၏စက်တင်ဘာလ 9, အလွန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ကံကောင်းတယ်။
ဤသည်မှာသင်၏ Lucky နံပါတ်များဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်၌ဤလအတွက်ကံကောင်းသည့်နံပါတ်များကိုပေးရန်ဝိညာဉ်ရေးမှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။
သင်၏ကံကောင်းသည့်နံပါတ်များကိုအကြိမ်ကြိမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်လောင်းခြင်းဖြင့်သင်အသုံးပြုရန်နှင့်လေ့ကျင့်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကံကောင်းသောနံပါတ်များကိုထိုင်းနိုင်ငံ၌ထီဖြင့် သုံး၍ နံပါတ် ၃ ခုကိုရရှိခဲ့သည်၊ ပထမနံပါတ် ၃ ခုနှင့်ပုံသေလက်မှတ်များတွင်ဆဌမမြောက်နံပါတ်ထီကိုထည့်သည်။ သို့သော်လက်မှတ်အနိုင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ငါ $ 1 ဖြစ်သည့်လက်မှတ်တစ်ချောင်းကိုကျွန်ုပ်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးသုံးလမှလေးလအထိလက်မှတ်များစွာဝယ်ခဲ့သည်။
သင်ကစားရန်ခွင့်ပြုလျှင်၊ ကစားရန်ခွင့်မပြုလျှင်၊ မည်သည့်ထီအမျိုးအစား၊ သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့်ဘောလုံး၊ မည်သည့်ဘောလုံးအမျိုးအစားများပေါ် မူတည်၍ တစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည်။ ပြန်စီစဉ်လို့ရမလား သင်၏ကံကောင်းသောနံပါတ်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ပင်ကိုယ်သိစိတ်ကိုလိုက်နာရမည် ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေကိုပေးဖို့ငါ့မှာတာဝန်မရှိဘူး။ သူတို့ကိုသင်သုံးချင်သည့်နည်းအတိုင်းသုံးရန်လိုသည်။
ပထမ ဦး စွာသင်၏မွေးစာရင်း၌သင်၏မွေးစာရင်းအတွက်သင်၏နာမကိုသင်၏ Numerology natal chart တွက်ချက်မှုတွင်ရှာရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ မွေးဖွားချိန်တွင်သင်ပေးထားသောအမည်အရေးမကြီးပါ။ သင်၏အမည်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါကဤအမည်ကိုသင်၏အမည်နှင့်မသုံးပါနှင့် သင်မွေးဖွားစဉ်ကမွေးဖွားခြင်းသည်သင်၏ ၀ ိညာဉ်၌အထင်အရှားရှိသည်။ သင်ကိန်းဂဏန်းအမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြသည်။ ငါမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်တစ်ခုထည့်နေသည်။ 1aသည် B ဖြစ်သည်။ သင်သည်နံပါတ်များအားလုံးကိုပေါင်းပြီးဘုံသို့ယူဆောင်လာသည်။ ၁ နဲ့ ၉ ကြားကိန်းက ၂၂၊ ၁၁ ရတယ်ဆိုရင်၊ ဒီနံပါတ်ကို master နံပါတ်ဖြစ်လို့မလျှော့ဘူးဆိုရင်၊ မင်းရဲ့နာမည်ဒါမှမဟုတ်မွေးသက္ကရာဇ်မှာနံပါတ်တွေပျောက်နေတာလား။ သင်၏မွေးသက္ကရာဇ်ကိုထိုနံပါတ်များနှင့်မလောင်းပါနှင့်။ သင်4နှင့် 8 ကိုလွတ်သွားပြီဆိုပါကကျွန်ုပ်သည်ဤနံပါတ်များထဲသို့ထည့်သည့်အိမ်များတွင်မနေပါနှင့်သို့မဟုတ်ထိုနံပါတ်များကိုလောင်းခြင်းသို့မဟုတ်မသုံးပါနှင့်။ ၎င်းသည်၎င်းနံပါတ်များနှင့်အတူ Karma ကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤနံပါတ်များရှိပါကဆက်သွယ်မှုမကောင်းပါ။ အသုံးပြု, ပြီးတော့သူကတစ်ခုခုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
ဒါသိပ်မကောင်းဘူး၊ ဒါဆိုမင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုမွေးဖွားတဲ့ရက်စွဲနဲ့တူအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏သမီးကညာနှင့်မွေးသက္ကရာဇ်တွင်သင့်တွင်မည်သည့်နံပါတ်များရှိသည်။ ဒီတော့ခင်ဗျားရဲ့မွေးသက္ကရာဇ်ကိုပေါင်းထည့်ပြီး ၁ နဲ့ ၉ ကြားကြားယူပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ၁၁ သို့မဟုတ် ၂၂ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မင်းရဲ့မွေးရာပါကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်ပါ။ မင်းရဲ့ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်ကိုသင်ရက်အရေအတွက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်လတစ်လ၏ဒုတိယနေ့တွင်သင်မွေးဖွားပါကသင်၏ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်သို့သင်ပေါင်းထည့်မည်။ ကံကောင်းသည့်နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည့်သင်၏မွေးဖွားစဉ်ကနံပါတ်တစ်ခုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ နာမည်လား သို့မဟုတ်သင်မွေးဖွားသည့်ရက်သို့မဟုတ်အခြားကံကောင်းသောနံပါတ်တစ်ခုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သောသင်၏မွေးဖွားသည့်ရက်၊ ဒီဘွဲ့ဒီဂရီမှန်လျှင်၊ သင် ၁၉ ဒီဂရီမွေးဖွားလျှင်ကင်ဆာသို့မဟုတ် ၁၉ ဒီဂရီကင်ဆာအဆင့်သို့တက်လျှင် ၁၉ ဒီဂရီသို့မဟုတ် ၁၉ ဖြစ်မည်။ နက္ခတ်ဗေဒင်အားဖြင့်သင်၏ကံကောင်းသောကိန်းဂဏန်းလည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီတော့ငါကိန်းဂဏန်းဗေဒနက္ခတ်ဗေဒင်အားဖြင့်မင်းကံကောင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းများကိုပေးနေတယ်။ ငါကပတ်ပတ်လည်ကိုလုပ်ပြီးကဒ်ပြားတွေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီသီးခြားစီအမှတ်အသားတစ်ခုစီကိုကြည့်မယ်။ Uranus Taurus မှာကတည်းကမေလအသစ်ဟာရှေ့ကိုရွေ့သွားတာပါ။
၎င်းသည်သင်၏ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေနှင့်ဘဏ္finာရေးကဏ္ chapter အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ လူတိုင်းအတွက်ဘဏ္ancesာရေးသာမကဂြိုဟ်ဘဏ္finာရေးများအတွက်ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မှယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံ၍ လုပ်စရာမလိုပါ။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေကိုသာအာရုံစိုက်ပါ၊ ဒီဆောင်းပါးမှာပြန်လည်ရှာဖွေပါ။ မင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးငါပြောခဲ့တာတွေကိုဂရုတစိုက်လေ့လာပါ၊
ထို့ကြောင့်သင်၏ကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်ကိုသင်၏မွေးနေ့နံပါတ်သို့ထည့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၁၁ ရက်၊ ဒုတိယ၊ သတ္တမမြောက်မွေးဖွားခဲ့လျှင်ကံကောင်းသည်။ သင်၏ကံကြမ္မာကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသောကံစမ်းမဲနံပါတ်နောက်တစ်ခုရှိပါသလား။ ငါဟာ ၁၁ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ ၁၁ ၁၁ ဖြစ်ပြီးငါ့နံပါတ်ကမွေးဖွားချိန်မှာ ၁၁ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကနှစ်ဆ ၁၁ ဖြစ်တယ်။ ကံကြမ္မာကို ၅ တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေတဲ့ pathoDouble 11 ကသဘာဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်သင်သိတယ်၊ ဒါကဒုံးပျံသိပ္ပံပညာမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုရှာဖွေဖို့သင့်ရဲ့နံပါတ်တွေကိုသုံးနိုင်တယ်။ ငါပြောနေတာအတိအကျနားလည်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဆောင်းပါးမှာမင်းမတင်တော့ဘူးဆိုရင်မင်းသမီးရဲ့သမီးနာမည်ကကြီးနေတယ်။ သင်၏သမီးနာမည်မှပျောက်ဆုံးနေသောနံပါတ်များသည်သင်၏မွေးသက္ကရာဇ်ပေါ်တွင်လောင်းမထားပါ။ သင်၏ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်သင်၏ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းနံပါတ်ကိုလည်းသင်၏မွေးနေ့နံပါတ်သို့ထပ်ထည့်သည်ကံကောင်းသည့်နံပါတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းသည် ၅ ဖြစ်ပါကသင်၏မွေးဖွားခြင်းဖြစ်ပါက နံပါတ် ၂ ကဒါဆိုမင်းက ၁၁ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားလာပြီးမင်းရဲ့ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်ကငါ့လိုပဲ။
ကံနံပါတ် ၇၊ ကျွန်ုပ်၏တိုးမြှင့်သင်္ကေတဒီဂရီမှာ ၉ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၉ တွင်လောင်းပြီးဖြစ်သည်။ တုန်ခါမှု ၉ ခုမှတစ်ဆင့်ဤလက်မှတ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံတွင်အမှန်တကယ်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဆိုသင်ဘာလုပ်ချင်လဲ၊ ဘာပေါင်းစပ်မှုမျိုးလုပ်ချင်လဲဆိုတာပဲစဉ်းစားပါ။ မင်းရဲ့နံပါတ်တွေနီးနေပြီလား ဒါကြောင့်မင်းကလက်မှတ်ဝယ်ဖို့၊ နံပါတ်တွေဘယ်လိုရွေးရမလဲ၊ မင်းနံပါတ်တွေကိုဘယ်မှာသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အကြံဥာဏ်ရှိရင်။ ထိုအခါရုံလုပ်ပါ။ ငါသိတယ်၊ မင်းလောင်းကစားခြင်းကိုအားပေးတယ်ဆိုတာမင်းသိပေမယ့်မင်းမှာသဲလွန်စတစ်ခုရှိတယ်၊ မင်းမှာငွေရှာဖို့ဒါမှမဟုတ်ငွေရှာဖို့နံပါတ်တွေဆီကနေတစ်ခုခုကိုရရင်မင်းအတွက်အကျိုးရှိမှာပါ။ ငါဒီမှာပျက်ကွက်တယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Aries ကို Pisces ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်ကဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုစီအတွက်ဘယ်ဆွဲရမယ်ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်။ ဒါဆို Aries နဲ့စမယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားအတွက်ဂဏန်းတွေရတော့မယ်၊ ဒါဆို ၁၈ မှာကျွန်တော်တို့မှာ Aries အတွက် ၁၈ ရှိတယ်၊ ၁၈ မှာလည်း ၁၄ လုံးရှိတယ်၊ အမေရိကမှာကိန်းဂဏန်းတချို့ရှိတယ်။ ကိန်းဂဏန်း ၄၆ ခုကိုတွက်ကြည့်ရမယ်။ အကယ်၍ သင်ကကြီးမားတဲ့နံပါတ်များသို့တက်လှမ်းမယ်ဆိုရင်၊ သင့်မွေးနေ့မှာနံပါတ်ကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်၊ သင်လေးယောက်လေးခုရှိပြီးသင်၏မွေးနေ့သို့မဟုတ်သင်၏နာမအတွက်နံပါတ်များကိုရွေးချယ်ပါကသင်ဟာအသက် ၄၂ နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုခုနစျပါးနယျတယျ၊ ဒီတော့ ၁၁ အမြှောက် ၁၁ ထပ်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါဆိုနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ငါလည်း Aries အတွက် ၃၃၃၃ ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာသုံးခုရှိတယ်၊ အဲဒါသုံးခုဖြစ်လို့အဲဒါနှစ်ထပ်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ဒါကို3အဖြစ်လုပ်တယ်။
ဒီတော့ Taurus ။ ငါဒီတစ်ခုဆှဲ။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Taurus 27 to 82 နဲ့သွားမယ်၊ ဒါဆို2+2က ၂၂ ဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုသင်က 22 နဲ့5တို့ကိုလည်း Taurus အတွက်လုပ်နိုင်တယ်။
Taurus အတွက်7သည် 7Okay အတွက်5နှင့်2ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုငါတို့ Gemini Gemini သို့ညှိလိုက်သည်။38 8 10 10 တစ်ညသည်နှစ်ဆယ်တစ်ဆယ့်ခုနှစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူကသူဟာနောက်တဖန်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုအဖြစ်ပြောနေတာရှစ်ဆယ်ရှစ်။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ဆယ်ငါးခြောက်ဆယ်ခြောက်ခြောက်ခြောက်သုံးခြောက်သွားနိုင်ပါတယ်၊ ၃၆၆၆၃၆ ရပါတယ်။ ဒါဆိုဖုန်းမြည်သံမျိုးပါ။ Gemini okay၊ နောက်ဆိုင်းဘုတ် Cancer1 / 1 ငါလည်း 111 လို့ပြောနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် ၁၁ လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာနှစ်ချက် ၁၁ ရှိလျှင်၊ ကင်ဆာက ၄ ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်။ ၁၁ ၁၁ ၁၁၊ ၂၂ ၂၂ ရမယ်၊ ၉ က ၉၂၊ ၂၉ ၂၉ ၂၉၁၂ ၂၂ ရှိမယ်။ မင်းမှာအဲဒီမှာ Master နံပါတ်ကင်ဆာရှိတယ်ကောင်းပြီ၊ ဒါကအဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။ Alright 21 သည် Cancer အတွက်မှန်ကန်သည်။ LeoLeo နှစ်ဆယ့်သုံးယောက်ရှိသည်။ သုံးဆယ့်လေးနှစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ လေးဆယ့်လေးပါးဖြစ်နိုင်သည်။ လေးဆယ်ငါးလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ၄၉ သို့မဟုတ် 94Okay ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ၁၁၊ နှစ်ဆယ့်တစ် ဦး ၁၅ သို့မဟုတ် ၅၁ ကနေ ၂၁ ဒါမှမဟုတ် ၁၂ က GoVirgin Libra96Can be96697 and19OkayWaage1991 ၉ ဒါဆိုခင်ဗျားကိုးခုနဲ့စိတ်သဘောထားရှိလား။ ၇ ။
အိုး၊ ဒီမှာကိုး။ ဟုတ်တယ်၊ ခြောက်ဆယ့်ခုနစ်ခုနစ်ခုနစ်၊ ၁၆ ပါ၊ ငါဟာ ၁၆ နှစ်ပဲ ၆၁ ရှိမယ်။ အဆင်ပြေ Scorpio၊ အဆင်ပြေလား၊ တစ်ဆယ့်ခြောက်ခြောက်၊ ၆၆၊ ၂၆ ၆၂ ။ သုည။ ၁၀ ရနိုင်တယ်။ တစ်ခုက ၁၁ ဖြစ်လို့ရမယ်၊ တစ်ဆယ့်ခုနစ်ဆယ့်ခုနစ်က ၇၁ နဲ့သုံးရမယ်။
အိုကေသုံးဆယ့်ခြောက် ၆၃၆-၆၆၂၆၇၃ ၃၀ နှစ်ဆယ်လိုင်းကွင်းဆက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကောင်းပြီကောင်းပြီ၊ လေးနက်သောနိမိတ်လက္ခဏာမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့တွင် Scorpio Sagittarius သည်အလွန်များပြားလှသော stack များကိုသိပြီးနောက်ဆုံး Pisces အတွက်ရောမွှေရန်လိုအပ်သည်ဟူသောပြင်းထန်သောနိမိတ်လက္ခဏာမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့်နိမိတ်လက္ခဏာရှိသည်။ အိုကေ၊ ဒီလို Sagittarius-Capricorn, Capricorn, ဒီဟာ Aquarius ပါ။
အိုကေ၊ သုံးရှစ်ခုနစ်တစ်ဆယ့်သုံးရှစ်ခုနစ်တစ်ဆယ့်သုံးသုံးရှစ်သုံးဆယ်ခုနစ် ၁၅၈၈-၇၈ Capricorn ငါ Capricorn ငါးခုအတွက်ဘာထပ်ရှိသေးလဲ။ သင့်တွင်နတ်ဆိုးငါးကောင်၊ ကျိန်းသေ55553နှင့် Capricorn အတွက်သုံးဆယ့်ငါးကဒ်၊ အိုကေ၊ Aquarius လည်းရှိသည်။ ငါငါးပြောင်းလဲရန်ရှိသည် ဒီတစ်ခါလည်းငါကအခြားကုန်းပတ်အလုံအလောက်ကောက်ယူကြပြီမဟုတ်။
ကောင်းပါပြီ၊ ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီးသည် ၄၄၄၁ ၁ ၁၁၂၄၄ ဖြစ်ပြီး၊ ၄၄ မှာ ၈ နှစ်နှင့်ကိုးဆယ့်ကိုးနှစ်ဖြစ်သည်။ ကိုးဆယ့်ရှစ်ဆယ်တစ်ဆယ့်ခုနစ်နှစ်၊ တစ်ဆယ် and1010 ၁၀ နှစ်ဆယ်Okay - ဒါကကောင်းတဲ့ AquariusOkay ဒါကြောင့် Pisces Pisces ကောင်းတဲ့အရာကနေငါရောနှောမယ်။ အိုကေတယ်နော်? ငါးတွေ ၁း၅၊ ၁၅၊ ၅၁ ဆိုတော့ ၇ ခုရှိမယ်၊ တစ်ခုက ၃ ခုက ၃ ခုလား။ ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ လေးဆယ့်လေးဆယ်မှလေးဆယ့်လေးဆယ့်လေးရှစ်ရှစ် ၈ အတွက်အနည်းငယ်ကောင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းအနည်းငယ်ရှိပြီး ၁ က ၂ သို့မဟုတ် ၁၁၁၈ Pisces အတွက်ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုဤ session ကိုခံစားခြင်းနှင့်ဟုတ်ကဲ့, ကံကောင်းပါစေမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ။ သင်၏နံပါတ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်ပျော်ရွှင်သောအချိန်ပါ။
ငါသည်သင်တို့ကိုအားလုံးအကောင်းဆုံးယခု ciao အလိုရှိ၏
'လူ့စိတ်ဝိညာဉ်သည် yin နှင့် yang တို့နှင့်တူသည်' ဟူသောစကားဟောင်းရှိသည်။ လူတိုင်းတွင်အလင်းအနည်းငယ်နှင့်မှောင်မိုက်အနည်းငယ်ရှိသောကြောင့်မှန်ကန်သည်။ သင့်ရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနိမိတ်မှာအမျိုးအစားရှိသလားသိလား အမှောင်လား ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့ရှာမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်မီ၊ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးအသိပေးချက်ခေါင်းလောင်းကိုခေါ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာနှင့်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ဤသည်မှာရာသီဥတုတစ်ခုချင်းစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ် အခြေခံ၍ ထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ကောင်းပြီ, နောက်ထပ် ado မရှိဘဲ။
ဆောင်းပါးထဲကို ၀ င်ဖို့အချိန် ...
AriesDark Side: စိတ်မရှည်ခြင်းနှင့်စိတ်မရှည်ခြင်း Aries လူများသည်တက်ကြွ။ အားကောင်းသောခေါင်းဆောင်များဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သငျသညျ, စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရည်မှန်းချက်ကြီးနှင့်ရဲရင့်စိတ်သဘောထားရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ဤထူးခြားသောလက္ခဏာများအားလုံးနှင့်အတူ Aries တွင်အားနည်းချက်နှစ်ခုရှိသည်။
၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာသူတို့၏စိတ်မရှည်နိုင်သည့်အရာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်သရုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီစဉ်းစားတွေးခေါ်သည့်အကောင်းဆုံးလူများမဟုတ်ပါ။ ဤအင်္ဂါဂြိုဟ်အုပ်ချုပ်သောနိမိတ်၏ဇာတိများသည်ပထမ ဦး စွာပြုမူလိုသည်နှင့်အမျှတွေးခေါ်သူများထက်လုပ်သူပိုများသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့လိုချင်တာထက်ပိုပြီးဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ဒုတိယအမှားကစိတ်မရှည်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ Aries သည်အလွန်အေးဆေးသောရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်စောင့်ချင်သူများမဟုတ်ပါ; သူတို့တစ်တွေပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အခါသူတို့ဟာနောက်ခြေလှမ်းကိုစီစဉ်ပြီးပါပြီ။ ဒါကစာရွက်ပေါ်မှာကောင်းနေပေမဲ့တကယ့်ဘဝမှာမင်းလုပ်ရမယ့်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းသင့်ပါတယ်။
အချိန်ကာလနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောခြင်း၊ နောက်ရာသီနိမိတ်လက္ခဏာသည်အလွန်ကောင်းသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျ Taurus ကိုသိလျှင်, သင်သည်သူတို့၏အချိန်ကိုက်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသိကြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သူ၏တောက်ပသောအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူတကွလက်တွဲသွားပြီးရဲကအချိန်မီရောက်ရှိခြင်းအပေါ်မိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူသည်။
သူ၏အကြီးမားဆုံးသောပိုင်ဆိုင်မှုမှာသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုမရောက်မှီတိုင်အောင် Taurus အရှုံးမပေးပါ။ အဲဒါကြောင့်သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာသူတို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ မင်းတို့ကိုငါတို့မယုံဘူးဆိုရင် Mark Zuckerberg ကိုမေးပါ။
သို့သော်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်၊ ဤရာသီခွင်အမှတ်အသားအောက်မွေးဖွားသူများသည်အလွန်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ သူတို့ကခက်ခဲရှာတွေ့ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံနှင့်အလွန်မြဲရှိနိုင်ပါသည်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆွေးနွေးခြင်းသည်သူတို့၏အလျှော့မပေးသောအလေ့အထကြောင့်ပြင်းထန်သောငြင်းခုံမှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကောင်းမှုကိုမပြောပါ၊ အခြားသူများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုမြတ်နိုးခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မြေပြင်ကဲ့သို့ကောင်းသည်ဟုသာပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
လာမယ့်ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလွယ်တကူအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သော်လည်း၊ ကွဲပြားသောပြhasနာတစ်ခုရှိသည်။ gemini dark Side: InconsistencyOkay၊ တစ်ခုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းရအောင် Gemini သည်တောက်ပသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။ ဒီရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာအောက်မှာမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေဟာကြီးကျယ်တဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူတွေဖြစ်တယ် သူတို့ကအသေးစိတ်အသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကဆက်သွယ်ရေးမှာကောင်းတယ်။
ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောထင်ရသောရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာအတွက်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာ၎င်းတို့သည်တသမတ်တည်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ Geminis တွေဟာအရာရာကိုခြေရာခံဖို့အမြဲတမ်းမကောင်းဘူး။ ၄ င်းတို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုထိခိုက်နိုင်သောစီမံကိန်းတစ်ခုကိုသာစတင်နိုင်သည်။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအကြောင်းပြောရရင် Gemini ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန် ၉-၅ ကိုငြီးငွေ့သွားပြီးစူးစမ်းလေ့လာမှုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်သီးခြားintoရိယာတစ်ခုသို့အခြေချရန်ခက်ခဲစေသည်။ ul? အမွှာအများစုသည်ဤမကိုက်ညီမှုများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပုံမှန်အဆင့်သို့ရောက်သွားသည်။
သူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းဘဝမှာသူတို့လိုချင်တာကိုပိုပြီးသေချာအောင်လုပ်ဖို့ပိုများပါတယ်။ smartworkers တွေအနေနဲ့သူတို့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့သူတို့အတွက်လွယ်ကူပါတယ်။ ကဏန်းသင်္ကေတအဖြစ်ကဏန်းရှိသည့်နောက်ထပ်နိမိတ်သို့သွားကြစို့။ Cancer Dark Side: MoodyCancer သည်လူသားများနှင့်အတူရှိနေခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ လူသားများနှင့်အတူအခြားသူများအကြားတွင်သူတို့၏သဘာဝကရုဏာသည်ရှေ့တန်းတင်နေသည်။
များသောအားဖြင့်သူတို့သည်အဆွေခင်ပွန်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကို Scorpio နှင့် Pisces အပါအဝင်ရေနေသတ္တဝါသုံးခု၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ထားရှိခြင်းသည်ကင်ဆာရောဂါသည်အလွန်ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအနုပညာကိုကြိုက်တတ်ကြတယ်။ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း 'ငါတစ်နေ့လုံးထောင့်နားမှာထိုင်ပြီးငိုတော့မယ်' 'ကင်ဆာရောဂါ၏အမှောင်ထုဖြစ်သော၎င်း၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဘဝသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝ၏အကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်နိုင်သည်။
သူတို့ဟာသူတို့ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ တကယ်တော့သူတို့ဟာရာသီဥတုအပြောင်းအလဲမှာအသန်စွမ်းဆုံးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားမှုအားလုံးကိုခံစားနေရပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာဒီစိတ်ခံစားမှုတွေဟာအဖြစ်အပျက်အဟောင်းတွေကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ချဉ်းကပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သူတို့တွန်းချနေသောကြောင့်၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအနည်းငယ်စိတ်ခံစားမှုကိုရလျှင်သူကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာဘာမှမဟုတ်ပါ။ လာမည့်ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာသို့သွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့တွင် Leo Dark ဘေးထွက်ရှိသည်။ Self- ဗဟိုပြု၊ ဘုရင်နှင့်မိဖုရားများကိုရင်ဆိုင်ခြင်း၊ Leos သည်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုဖြစ်ရန်နှင့်၎င်းကိုမည်သို့ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသိသည်။
သူတို့သည်မာနထောင်လွှား။ ယုံကြည်မှုရှိပြီးသြဇာရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ ဤရာသီခွင်အမှတ်အသားအောက်တွင်မွေးဖွားသူတို့သည်လည်းလူတို့ကိုဆွဲဆောင်သောသဘာဝအသွင်ရှိသည်။ သူတို့၏တစ်ခုတည်းသောအမှောင်ထုသည်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်ကိုယ်ကျိုးရှာခြင်းဖြစ်သည်။
လီယိုနာဒိုသည် ၄ ​​င်းတို့၏စကြဝandာ၏ဗဟိုမဟုတ်ဘဲအခြားသူများကိုဂရုစိုက်ရန်သူတို့ကိုယ်သူတို့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးရန်မကြာခဏမေ့တတ်ကြသည်။ သူတို့၏လူငယ်များသည်လူအများကြားဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ လူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောရလျှင်နောက်လက္ခဏာသည်ချန်ပီယံမဟုတ်ပါ။ Virgo Dark Side - အလွန်အမင်းဝေဖန်ခြင်းသင်က Virgo တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်အရာရာတိုင်းရဲ့အောက်ခြေကိုရောက်ဖို့သင်နှစ်သက်ကောင်းနှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။
သင်ဟာအလွန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ ဒါကသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်တစ်ခါတစ်ရံအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းလူအများစုကြိုက်နှစ်သက်တာထက်ပိုသောက်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလွဲချော်ရန်သင်ခက်ခဲပြီးသင်ဘာမှမပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းကိုမြင်တွေ့ရန်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုခေါ်ပါ။ ဤသည်ကိုအခြားသူများကအမြဲတမ်းကောင်းစွာလက်မခံနိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့်ဤအမှားနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ထင်မြင်ချက်ကိုဖွင့်ဟသောအခါ၊ Virgos များသည်သူတို့ကဲ့သို့သစ္စာရှိကြောင်းသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။
ပြဒါးကြီးစိုးသောနိမိတ်လက္ခဏာမှ စတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နံပါတ် ၇ တွင်ရှိနေသည်။ … Libra မှောင်မိုက်သည့်အရာ - မပြတ်သားသည့် Libra သည်၎င်းတို့၏သံတမန်ရေးရာသဘောအရလူသိများသည်။ ဒီနိမိတ်လက္ခဏာကအရမ်းဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဟာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကတိုက်ပွဲတွေထဲမ ၀ င်ရဘူး။
Libra သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထွက်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်လူငယ်ဘဝတွင်ပြsomewhatနာများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။
ရလဒ်အနေနှင့်၎င်းတို့သည်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ရန်အခြားသူများထက် ပို၍ ကြာနိုင်သည်။ သူတို့ဟာ Aries လိုမထေမဲ့မြင်ပြုမူဆက်ဆံခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေမယ့်သူတို့နဲ့မိတ်ဖက်ရှာဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ အပေါင်းဘက်၌, တစ် ဦး Libra ဆုံးဖြတ်ချက်ချတစ်ချိန်ကသင်ကမပြောင်းနိုင်; သူတို့ဟာသူတို့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအားစွဲစွဲမြဲမြဲပြောဆိုခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်နိမိတ်လက္ခဏာသည်ပြwithနာမရှိပါ။
Scorpio Dark Side: Vengeful Scorpions တွင်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးများစွာရှိသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်မချင်းရပ်တန့်မနေနိုင်တဲ့စိတ်အားထက်သန်တဲ့၊ ဒါကောင်းလိုက်တာမဟုတ်လား။ ကောင်းပြီ၊ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအနုပညာတစ်ခုခုဖန်တီးဖို့ဒါမှမဟုတ်ဝတ္ထုရေးဖို့ဖြစ်ရင်သေချာတယ် ..
Scorpios များသည်လူအများစုဖြစ်ကြပြီးသင်ဖြစ်ပျက်လာသောအခါ၎င်းတို့နှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းကပိုကောင်းလိမ့်မည်။ ဒီဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေဟာသူတို့အမှားလုပ်မိတဲ့အခါခွင့်လွှတ်ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ သူတို့သည်သင့်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ခွင့်လွှတ်နိုင်လျှင်ပင်သူတို့အတွက်သင်ပြုခဲ့သောအမှုကိုသူတို့မမေ့နိုင်ပါ။
Scorpio မှ စ၍ စာရင်း၏နောက်ဇာတ်ကောင်သို့ကျွန်ုပ်တို့သွားကြသည်။ Protect Dark Side: Too Confident ကောင်းပြီ၊ သူတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအလွန်များတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကအသက်ရှင်ပြီးအသက်ဝင်စေတယ်။
မင်းကအမြဲအကောင်းမြင်ပြီးမျှော်လင့်တယ်၊ အကောင်းမြင်သဘောထားရှိရင်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘ ၀ ကအကောင်းမြင်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး။ ထိုအကောင်းမြင်မှုနှင့်၎င်းတို့သည်သဘာဝအားဖြင့်စွန့်စားခန်းများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများသို့ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် Sagittarius သည်အလွန်အန္တရာယ်များသောအရာတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှုတစ်ခုထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ကြောင့်သင်က၎င်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်ဟုသင်ထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုယုံကြည်မှုမျိုးဟာမကြာခဏဆိုသလိုပြိုလဲတတ်ပါတယ်။
သို့သော်ဤရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာအောက်၌မွေးဖွားသူများသည်အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးခရီးသွားဖော်ကောင်းများသည်အိမ်တွင်နေလို။ Netflix ကိုစောင့်ကြည့်လိုကြသည်။ ငါတို့ပြောနေတာ… Capricorn Dark Side: Saturn ရဲ့အဆိုးမြင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီနိမိတ်အောက်မှာမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းချင်ကြတယ်။ သူတို့လုပ်သမျှအားလုံးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်ကြတယ်။
နံပါတ် ၂ ကမပါဘူး။ သူတို့အဘိဓာန်ထဲမှာမရှိပါဘူး သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့သဘာဝကသူတို့ကိုရွယ်တူချင်းတွေထက်ပိုပြီးအလုပ်များစေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်။
ထိုကြောင့် Capricorn အများအပြားသည် ၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူတို့၏အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာသူတို့၏အဆိုးမြင်မှုဖြစ်သည်။ သူတို့ဆုံးရှုံးလေလေ၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုဆုံးရှုံးလေလေဖြစ်သည်။
Capricorn သည်သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုမကြာခဏရှိသည်။ သူတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာကိုမအောင်မြင်သောအခါသူတို့ကိုယ်တိုင်သံသယဝင်ကြသည်။ မိမိကိုယ်ကိုသံသယမရှိဘဲပြောခြင်းသည်နောက်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသည်။
Aquarius Dark Side: အရာအားလုံးကိုသိရန်ဟန်ဆောင်ခြင်း Aquarius သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်ကိုသွားသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာမထိုက်တန်သောအရာဖြစ်ကြပြီးထိုကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့ကိုချစ်ကြတယ်။ Aquarians အများစုသည်စာဖတ်တတ်ကြပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောခေါင်းစဉ်များပေါ်တွင်နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤဘဝ၌ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အကြောင်းအရာများစွာရှိပါသည်။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်အရာရာတိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသိရှိနိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်လွယ်ကူသောအယူအဆဖြစ်သော်လည်း Aquarius အတွက်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကအရာရာတိုင်းကိုထင်မြင်ချက်ပေးချင်တယ်၊ ဆွေးနွေးမှုတိုင်းမှာပါ ၀ င်ချင်ကြတယ်။
၎င်းတို့ကိုအခြားသူများကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်သို့မဟုတ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤသည်သောအတင်းအကျပ်သဘောသဘာဝကသူတို့ကိုဘ ၀ ၌အသစ်သောအရာများစွာကိုလေ့လာရန်နှင့်နောက်ဇာတ်ကောင်သို့သွားရန်အခွင့်အလမ်းများကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ Pisces Dark Side: Esisist တစ်ယောက်အနေဖြင့် Pisces သည်အနုပညာနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။
သူတို့သည်ကြီးမားသောအိပ်မက်များကိုယုံကြည်ပြီး၊ ကြီးမားသောအိပ်မက်များကိုသူတို့တစ်ခါတစ်ရံပျက်ကွက်လျှင်ပင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်များစွာကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်။ Pisces သည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်သည့်အမှတ်အသားဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုကိုငြင်းပယ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ သူတို့အတွက်ဒီငြင်းဆန်မှုကိုလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုလို့မြင်တယ်။
အပေါင်းဘက်တွင်၊ ဤသည်အခြားနေရာမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သူဖြစ်ခြင်းသည်ဤရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာ၏တစ်ခုတည်းသောမှောင်မိုက်သောအခြမ်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်လက်တွေ့တွင်သူတို့သည်သူတို့၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုသာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ ဒါဆိုမင်းကဘယ်နိမိတ်လက္ခဏာလား သင့်မှာဒီအရည်အချင်းတစ်ခုခုရှိပါသလား။ မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ သင့်ထံမှသင်ကြားလိုပါသည်။
2021 သည် Aries အတွက်ကံကောင်းသည်လား?
နှစ်2020အဘို့အကောင်းတစ်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်Aries။ ယခုနှစ်အစတွင်ဘဏ္financeာရေးနှင့်အလုပ်အရအပြုသဘောဆောင်သောတုန်ခါမှုကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အလုပ်အကိုင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တည်ငြိမ်မှုရှိရလိမ့်မည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးနာတာရှည်ကျန်းမာရေးပြissuesနာများ (ရှိလျှင်) ပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မည်။၁ ။ 2020 ။
မင်းဆိုရင်Ariesမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရောင်နီသည်၂၇ 2016 ။
Aries soulmate ကားအဘယ်သူနည်း
ဘာလဲအချစ်ဘို့Aries? Theအချစ်ရယ်ဘို့Ariesလီယို, Gemini နှင့် Sagittarius ဖြစ်ပါတယ်။ ကအချစ်ရယ်သင့်ဘ ၀ ထဲကို ၀ င်လာပြီးသင်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ သူတို့အတွက်သင်ခံစားရသည့်ပြင်းထန်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။သူတို့ဟာအရင်ဘဝကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိကျွမ်းခဲ့ကြတယ်လို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မကြာခဏယုံကြည်စေပါ။ဆယ့်ငါး 2020 ။
ရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံးတွင်,Ariesလူသိများသည်ချစ်မိခြင်းအမြန်ဆုံး။ O'Connor အရAriesပြိုင်ပွဲနေ့၌မြင်းများကဲ့သို့ထောင်ချောက်မှပျံသန်းသွားသည်။ ' သူတို့ကသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒများကိုအသည်းအသန်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ သူတို့ခံစားနေတယ်ဆိုရင်သူတို့အချစ်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူသူတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်၂ ။ 2019 ။
2021 သည် Aries အတွက်ကောင်းပါသလား?
နှစ်2020ဖြစ်လိမ့်မည်ကောင်းတယ်အတွက်တစ်နှစ်Aries။ ယခုနှစ်အစတွင်ဘဏ္financeာရေးနှင့်အလုပ်အရအပြုသဘောဆောင်သောတုန်ခါမှုကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အလုပ်အကိုင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တည်ငြိမ်မှုရှိရလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဖြစ်လိမ့်မည်ကောင်းတယ်နှင့်နာတာရှည်ကျန်းမာရေးပြissuesနာများ (ရှိခဲ့လျှင်) ပျောက်ကင်းလိမ့်မည်။၁ ။ 2020 ။
ဘယ်မှာလဲလုပ်ပါသူတို့ထိတွေ့ချင်တယ်? နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာများစွာ၏အဆိုအရAriesသူတို့ရဲ့ ဦး ခေါင်းဒါမှမဟုတ်ဆံပင်ညင်ညင်သာသာလေဖြတ်သောအခါယောက်ျားကချစ်ကြတယ်။ နား၏လည်ပင်းနှင့်နားနောက်၌ပါ ၀ င်သည့်ကောင်းမွန်သောခေါင်းအနှိပ်သည်စွန့်ပစ်မည်Ariesလူစွမ်းအင်။ ကြောင်းအချက်မှစ။ သင်သည်အမှုအရာကိုသင်မဆိုအဆင့်အထိယူနိုင်ပါတယ်လိုချင်တယ်။၂၆ 2020 ။
Aries အတွက်ဒီနေ့အတွက် horoscope ကဘာလဲ?
မျက်မှောက်ခေတ် Horoscope - သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်သော်လည်းသင်မရပ်တန့်ပါနှင့်။ ယနေ့သင်သည်အစီအစဉ်များအားလုံးကိုစီစဉ်ရန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်၊ သို့သော်အခြားအရေးမကြီးသောအရာများကိုဘေးဖယ်ထားပြီးအရေးကြီးသောအလုပ်များကိုသာအာရုံစိုက်ပြီးမှသာ။ ကြယ်တို့သည်သင့်ဘက်၌ရှိကြသည်။ ယနေ့အတွက်သိကောင်းစရာ - 'အောင်မြင်မှုဆိုတာမတော်တဆမဟုတ်ပါဘူး။
သင်တပ်မက်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်အတွင်း၌ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့လသည်မင်း၏ဒဏ္icalာရီဆန်ဒရှိသော ၁၂ ခုသောအိမ်၊ အိပ်မက်၊ ကမာ၊ အထီးကျန်မှုနှင့်နောက်ကွယ်ရှိအရာအားလုံးအတွင်းသို့ကျလိမ့်မည် - ပရမ်းပတာမှထွက်ခွာရန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြိတ်ဆုံမှခြေလှမ်းလှမ်းရန်သင့်အားအားပေးသည် ။
လသည် Aquarius သို့မဟုတ် Aries တွင်ရှိသလော။
မေလ 04, 2021 - ယနေ့သင့်အလုပ်အသိုင်းအဝိုင်း၏သဘောသဘာဝကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကောင်းမွန်သောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ လသည် Aquarius နှင့်သင်၏ ၁၁ ယောက်မြောက်အိမ်တွင်ဖြစ်သည်။ သင်နှင့်အလုပ်လုပ်သူများနှင့်သင်မည်သို့ဆက်သွယ်မှုရှိသနည်း။ သင့်တွင်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရှိသည်ဟုခံစားရလား… Get Your Horoscope & gt; & gt;